दशैँको अघिल्लो साँझ !
दशैँको अघिल्लो साँझ । जयन्तीले कोग्रा स्टेशनमा आउन अझै आधा घण्टा लाग्छ भनेपछि हो मलाई के गरौँ कसो गरौँ भएको । कोग्रा स्टेशन पारीको स्टेशन रोडको रकीङ नेपाल ग्रोसरी सपमा गएर नेपाली पत्रिका उठाएँ । मलाई कुर्न झैँ गार्हो केही लाग्दैन । छट्पटी हुन्छ । स्टेशन रोडको पुछार हुँदै होगवेन पार्कमा पुगेँ । कुनाको कुर्चीमा गएर बसेँ । पारी पट्टीको कुनामा एउटी आमा ढल्न लागेको साँझजस्तै धमिलो मुद्रामा देखेँ ।
पारी पट्टी भएपनि दुरी टाढा थिएन । पहेँलो सारीमा पातलो छिर्केमिर्के राटो बुट्टा थियो । चोलो खैरो थियो । सादा थियो । अनुहार झनै सादा । मलिन । कपाल भने मेरो भन्दा पनि कालो रैछ । मनमनै अन्दाज लगाए । छोराले बोलाएको भए बुहारीले नत्र छोरीले कालो लगाइदिइन् होला । साठीदेखि पैँसठ्ठीको बीचमा हुन सक्ला उमेर ।
हरियो घाँस र हरियै रुखले ढाकेको पार्कको कुनामा यसरी झोक्राएर बसिरहँदा बोल्ने आँट भएन । मैले हातका पत्रिका कुर्चीको छेउमा राखेँ । आमाले सानो घ्यू रंगको पछ्यौराको एउटा पाटोले मुख छोपिन । त्यसपछि उनीले आफ्नो भावना छोप्न सकिनन् । प्रष्ट देखिएको उनको आँशु । नभक्कानिए पनि मैले प्रस्ट सुने उनको रुवाइ । पार्कमा अरु निकै तल दुइटा चाइनिजजस्ता देखिने दुइटा लोग्नेमान्छेहरु बसिरहेका थिए । प्राय पार्कमा बढी नै मान्छे हुन्थे । आज थिएनन् । विकेण्ड नभएर होला । म नजिकै गएँ । उनकै कुर्चीमा बसेँ । बस्दा ध्यान कुर्चीमा त्यती थिएन । कुर्चीमा सानो खाल्टो रैछ । खाल्टोमा अलिकति पानी । शरिरको सानो आयतन चिसो भयो । उनीले मलाई हेरिन र रुन छोडिन् ।
‘के भो आमा ? किन रुनु भ’को ?’
‘केही होइन बाबु ?’
आमा तर्किन खोजिन् । कतिपय आमाहरूलाई सिड्नीमा लामो समय बस्नु पर्दा अत्यास लागेको पनि पाएको छु । आ—आफ्ना कारण होलान् । मैले खोतल्न चाहिन । तर उनीलाई नबिथोलिन पनि बस्न सकिन ।
‘तपाईं रोकोे देखेँ, मेरी आमा नि तपाईंकै उमेरकी हुनुन्च । त्यसैले बोल्न संकोच मानिन । आमाको घर कहाँ नेपालमा ?’
मैले कुराको प्रसंग ठेगानामा मोडिदिएँ ।
‘काठमाण्डू हो बाबु । तिम्रो कहाँ नि ?’
‘मेरो पोखरा ।’
यसरी हाम्रो कुराले बाटो पायो । संवादको बाटो फराकिलो हुँदै गयो । आमा खुल्न थालिन । आमाको कुरामा भुल्न थालेँ । अघि भर्खरै रोएकी आमाको मुस्कान पनि देख्न पाएँ । कुराको बाटो अझै लम्ब्याउन खोज्दै थिएँ । बीचमा फोनको रेडलाइट बल्यो । जयन्ती प्लेटफार्म आइसकी छन् । मैले उनीलाई पर्खिन लगाएँ । कुरा धेरै भयो । कहाँ बस्नुन्छ भनेर भनेर सोध्न भुलेछु । सम्झिने वित्तिकै सोधिहालेँ ।
‘हसभिल बस्छु ।’ आमाले हर्स्टभिल भन्न खोजेकी थिइन् । कोग्राबाट हिँडेर जान कम्तीमा आधा घण्टा लाग्छ । मैले हिँड्नुस् म पु¥याइदिन्छु भनेँ । उनले पर्दैन भनिन् । मैले जोड गरेँ । उनी मानिनन् ।
‘हर्स्टभिल कतातिर बस्नुन्छ ।’
नसोधेको भए पनि हुन्थ्यो । तर सोधी हालेँ । आमा अक्मकाइन् । मलाई अलिकति शंका लाग्यो । जयन्तीको फेरी फोन आयो । मैले उठाइन । टेक्स्ट गरेँ ।
‘भोली दशैँ छ आमा, अब पार्कमा एक्लै नबस्नुस् । घर जानुस् ।’
‘जान्थेँ बाबु छोरो अस्पतालमा छ ।’
‘राती उठेर, घरभित्र बाढी पस्यो भन्छ, दिमाग ठिक ठाउँमा छैन बाबु ?’
‘कहिलेदेखि यस्तो भको ?’, मैले लामो श्वास फेर्दे सोधेँ ।
यत्तिकैमा आमालाई लिन एकजना केटी आइन् । शायद बुहारी होलीन् । टाढैबाट देख्दै आमाले ल म जान्छु भन्ने हतारो देखाइन् । मैले हुन्छ भनेँ । म हिँड्दा, आमालाई लिन आउने केटी खुशी नभएको थाहा पाएँ ।
सुनेको नसुन्यै गरेर हिँडिरहेँ । तर सुनिरहेको थिएँ ।
‘को हो त्यो ?’
‘अनि किन बोल्न परेको हो ?’
म प्लेटफार्म मा पुगेँ । पुगेपछि ढिलो भएकोमा जयन्तीको गन गन शुरु भयो । सपिङ गर्नुपर्ने थियो । गर्न मन लाग्ने । दशैँको मुखमा आमाको खुशीलाई कति ठूलो बाढीले बगाइएछ । आमा विधवा थिइन् । पहिरनले अड्कल काटेँ । बेसाहारा नभइदिए हुन्थ्यो ।